Usoro teknụzụ: Blockchain Ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na-akwado nkwado na ndị na-emepụta amụma
Mbido Media Usoro nke Tech (Channels TV)
Usoro teknụzụ: Blockchain Ecosystem Stakeholders kwadoro mmekorita ya na ndị na-emepụta amụma
in Usoro nke Tech (Channels TV)
Kedu ihe abụrụla ebe obibi blockchain kemgbe Central Bank of Nigeria (CBN) kpebiri igbochi ọrụ ego metụtara akụ crypto?
N'ime ihe omume Tech Trends nke izu a, anyị nwere mkparịta ụka na Barinor Kue, onye ndụmọdụ gbasara iwu, Blockchain Nigeria User Group, onye kesara echiche ya banyere okwu a karịsịa site n'echiche iwu.
CFA: Obi dị m ụtọ na m nwere gị na Tech Trends taa.
Barinor: Daalụ nke ukwuu.
Usoro teknụzụ: ka Womenovate si emetụta ndị ntorobịa Naijiria
Tech Trends: Na-abawanye ntinye ego na Naijiria - Ezinne Obikile
Usoro teknụzụ: Ihe kpatara ebe nrụpụta ihe ji dị mkpa maka mpaghara ime obodo - Taofeeq Olatinwo
Usoro teknụzụ: Cybersecurity na ịnọ na nchekwa na ịntanetị
CFA: Ọ dị mma. Ị na-ahụ ka m na-amụmụ ọnụ ọchị mana amaghị m ebe m ga-amalite mana, kedu ihe mere na gburugburu ebe obibi cryptocurrency kemgbe mmachi CBN?
Barinor: Ọtụtụ ihe emeela kemgbe mmachi ahụ. Na mbụ, ọkwa ahụ tụbara n'ezie na gburugburu ebe obibi n'ime oke ụjọ. Ndị mmadụ nọ na-eche n'ezie ka ha ga-esi gaa n'ihu na azụmahịa cryptocurrency n'etiti enweghị ohere ịnweta ọrụ ụlọ akụ.
Otú ọ dị, ka oge na-aga, ndị mmadụ echepụtala ụzọ - n'ezie, ọ na-adị mgbe nile - ụzọ azụmahịa nke ndị ọgbọ na ndị ọgbọ na-adị mgbe niile. Ọ bụ naanị ịnweta ọrụ ụlọ akụ na-eduzi, dị ka ịtụgharị fiat na cryptocurrency na cryptocurrency ka fiat, ọnụ ụzọ ahụ mere ka ịzụ ahịa na cryptocurrency dị mfe.
Ndị ọgbọ na ndị ọgbọ na-abịa na ihe ịma aka ya mana echere m na ọtụtụ n'ime nsogbu ndị ahụ agafeela ma dịka ị na-ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ anaghị eme mkpesa ọzọ. Ha na-etinye uche naanị n'ịzụ ahịa ha n'ihi na ha achọpụtala ndị ọgbọ na ndị ọgbọ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
CFA: Ya mere, ajụjụ ugbu a bụ, mmegharị ahụ - igbochi gburugburu ebe obibi - ọ bụ ihe amamihe dị na ya? N'ihi na ugbu a, ọ bụrụ na ndị mmadụ ka na-aga n'ihu dị ka 'azụmahịa dị ka ọ na-adị', na gọọmentị enweghị ihe ọ bụla, mgbe ahụ, onye na-efunahụ?
Barinor: N'ezie, echere m na gọọmentị na-efunahụ ya. SEC tinyere n'ezie usoro nhazi. Ọ bụghị nke zuru oke ma opekata mpe, ha mere nkwupụta na cryptocurrency ma echere m na ha gaara enwe ike ịnye ikike, ịtụ ụtụ na ụtụ isi mgbanwe crypto - ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye ọrụ cryptocurrency dị ka mgbanwe.
Ma anyị enweghị ike inwe mgbanwe ụmụ amaala ugbu a, na-arụ ọrụ nke ọma, nke ọma n'ihi mmachi a, mgbe ahụ, anyị nwere onye Naijiria nke nwere olu dum na-eji ọrụ mgbanwe nke na-ebi na mba ndị ọzọ ma na-akwụ ụtụ isi nye ndị ahụ. mba.
Ya mere, n'ozuzu, Naijiria na-efunahụ dịka obodo. Agaghị m asị na ọ bụ ọchịchị na-efunahụ ya. Echere m n'ozuzu, anyị na-efunahụ n'ihi na n'agbanyeghị na anyị na-erite uru site na ịzụ ahịa, n'agbanyeghị na anyị ... (lee vidiyo zuru ezu). Ebe a)
NCC weputara "Shine your eyes, no fall mugu" na Benin